एकाबिहानै फेरि सल्यानबाट आयो मनै रु’वाउने खबर ! मनमा दया भए RIP लेख्नुहोला: – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २८, २०७८ समय: ११:२०:०७
सल्यानमा हाेम आइसाेलेशनमा बसेका दुइ जना महिलाकाे काेराेना संक्रमणबाट मृ’त्यु भएकाे छ ।जिल्लाकाे कपुरकाेट गाउँपालिका वडा नम्बर ३ निवासी ४० वर्षिया महिलाकाे काेराेना संक्रमणबाट आज (आइतबार) बिहान मृ’त्यु भएकाे स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानले जनाएकाे छ ।उनकाे गत बैशाख १७ गते गरिएकाे पिसिआर परिक्षणमा काेराेना पाेजेटिभ देखिएकाे थियाे । त्यसपछि उनि हाेम आइसाेलेशनमा बस्दै आएकाे स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका सुचना अधिकारी थलराज डिसीले बताए ।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
यो पनि:कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका अभिनेता राहुलको भिडियो बाहिरियो, अक्सिजनको साटो मास्क मात्रै लगाइदिए डाक्टरले
अभिनेता राहुल बोहराको आइतबार नि’धन भएको छ । उनी कोरोनाद्वारा पी’डित थिए र आफ्नो उपचार गराइरहेका थिए । राहुलकी श्रीमती ज्योति तिवारी श्रीमानको वि’योगमा छिन् । यसैबीच उनले आफ्ना श्रीमानको न्यायको माग गरेकी छिन् ।
ज्योतिले सोसल मिडियामा एउटा पोस्ट लेखेकी छिन् । साथै राहुलको एउटा भिडियो सेयर गरेकी छिन् । जसमा उनले अस्पतालको ला’परवाहीबारे कुरा गरिरहेकी छिन् ।भिडियोमा राहुलले अक्सिजन मास्क ह’टाएर आजको समयमा यो निकै मूल्यवान् भएको बताइरेका छन् ।
उनले यो बिना बि’रामी छ’टपटाउनले गरेको पनि बताए । त्यसपछि उनले पुनः मास्क लगाएर भन्छन् कि यसबाट केही आइरहेकै छैन ।राहुल थप्छन्, ‘अ’टेन्डेन्ट आएकी थिइन् । मैले उनलाई यसबारे बताउँदा उनले एउटा बो’तल हुन्छ र त्यसबाट यसमा पानी आइरहेको बताइन् ।
त्यसपछि उनी जान्छिन् । त्यसपछि फेरि उसलाई बो’लाउ । आउन त आउँदैनन् । एक डेढ घण्टापछि आउँछन् त्यतिबेलासम्म ज’सोतसो मि’लायो । पानी छ’र्किने, यसलाई लगाउने । कसैलाई भन्यो भने एक मिनेटमा आउने भन्छन्, उनीहरु आउँदैनन् । म यो मास्क मात्रै के गरुँ ?’
राहुलकी श्रीमतीले लेखिन्, ‘हरेक राहुलका लागि न्या’य । मेरा राहुल गए, यो सबैलाई थाहा छ तर कसरी ? यो कसैलाई पनि थाहा छैन । राजिव गान्त्री स्पे’शलिटी ह’स्पिटल दिल्ली । यसरी उपचार गरिन्छ त्यहाँ । आशा गर्छु, मेरा श्रीमानले न्या’य पाउनेछन् ।अर्को राहुल यो दु’नियाँबाट बि’दा हुनु हुँदैन ।’
स्मरण रहोस्, राहुल बोहरले शनिबार फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेखेर मानिसहरुलाई मद्दत गरिदिन अ’पिल गरेका थिए । त्यसको केही घण्टापछि उनको नि’धन भयो ।राहुल बोहराले लेखे, ‘मैले पनि राम्रो उपचार पाएको भए म पनि बाँ’च्थेँ । तिम्रो राहुल बोहरा । चाँडै नै जन्म लिनेछु र राम्रो काम गर्नेछु । अब हि’म्मत हा’रिसकेको छु ।’ उनले आफूबारे थप जानकारी पनि साझा गरे ।